Shina ara-toekarena Shina efatra famoronana hazo vita amin'ny hazo R4 sy mpanamboatra | JCUT
1. Ny fanamboarana sy milina fanokafana maharitra efatra dia natao ho an'ny mpanjifa hanatsarana ny fahombiazana. Ny loha efatra dia fehezin'ny cylinders ary azo ovaina, izay afaka mamita ny fandaharana marobe nomanin'ny mpanjifa (ny fanodinana asa dia mitaky fanovana fitaovana ao anatin'ny 2-4 fitaovana), izay mamonjy ny fanovana antsokosoko antsokosoko antsokosoko eo afovoany ary mety amin'ny vokatra misy lotra marobe amin'ny famokarana varavarana hazo, fanaka ary zavamaneno. Fitaovana telo ity fitaovana ity, izay mahomby amin'ny fanamboarana milina fananganana hazo tokana loha tokana, milina fanoratana indroa na telo-loha ary milina fanoratana hazo vita amin'ny loha.
2. Ny fifehezana ara-tsaina: ny rafitra fanaraha-maso milina mirindra fiasa mirindra (tsy solosaina tsotra + solosaina), miaraka amin'ny fiatoana, herinaratra ary fanoratana mitohy, ary fiasa fanitsiana mandeha ho azy miverina amin'ny teboka tany am-boalohany, mahomby amin'ny fiantohana ny mahitsy ny fanodinana rehefa miasa manodidina ny famantaranandro; Ny fandefasana fanamoriana U disk, maimaimpoana amin'ny fidiran'ny tsimok'aretina amin'ny solosaina, miaraka amin'ny fahatokisana avo sy ny fahombiazana avo lenta, amin'ny fotoana iray tsotra sy mora ianarana, ny mpanjifa dia afaka mamehy haingana ny fampiasana ny fitaovana.
3. Ny famolavolana maha-olombelona: ny fanodinana marani-tsaina miaro ny sisintany miaro ny sisintany mba hisorohana ny fifandonan'ny mekanika nateraky ny firindrana famolavolana mihoatra ny haben'ny fanodinana; fanaraha-maso haingam-pandeha marani-tsaina: afaka mifehy ny hafainganam-pandeha fanamboarana, tena manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana, manitatra ny fiainana fitaovana ary hanatsara ny vokatra. Milina fanosotra dingana efatra, tombony kely fanosorana dingana efatra, milina fanakorontanana CNC
4. Famolavolana mekanika tsy manam-paharoa: misy ny spindle azo amboarina amin'ny alàlan'ny pump pump na skotch mba hampiasana ireo fitaovana eo amin'ny takelaka miasa. Ny fametrahana fitaovana dia marina, haingam-pandeha avo lenta, ary ny fahombiazan'ny fanodinana dia avo.
5. Fampandrosoana ny rindrambaiko: algorithm fanaingoana curve telo-isa avo lenta, polyline maharitra, dia afaka miantoka ny haingam-pandeha sy ny fahitsiana ny fikorontanan'ny curve; Fampandrosoana mialoha ny fanamboarana ny rakitra dia afaka manampy ireo mpampiasa hanitsy lesoka amin'ny fanodinana rakitra amin'ny fotoana, ary afaka mifanaraka tsara amin'ny kaonty famokarana an-trano sy vahiny vokarin'ny rindrambaiko samihafa (toa an'i MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, Jingdiao , sns).
Solon'ny hazo sy fanaka haingon-trano fanaka: kitay matevina sy varavaram-baravarankely, varavarana kabinetra, sary sokitra fiaramanidina lehibe, sary sokitra vita amin'ny hazo ary fikosoham-bary, sary sokitra fanaka, sary sokitra vita amin'ny mahogany antitra, sary sokitra vita amin'ny sary vita amin'ny hazo sy ny indostria hafa.
Momba ny fanamboarana hazo vita amin'ny hazo 4 R4
Faritra asa （S * Y * Z） 1300 * 2500 * 200mm
Spindle manokana ho an'ny fanodinana hazo sy fanoratana GDZ Rivotra fampangatsiahana an'habakabaka 6KW * 1 + 3.5KW * 3
Motor Motera leadshine 758s
Rafitra fanaraha-maso Rafitra fanaraha-maso ShanLong L1000
Mpanangona vovoka 5.5KW / 380V Mpanangona vovoka avo lenta
Paompy vaky 7.5KW / 380V pump adsorption
Transmission X, Y manafatra 25 kamiao fiara; Z import Taiwan TBI Ball Screw Drive
fetra Ny fetran'ny mpanapaka hazo
fitoeran'entana Hatrana 1.5M
Baibolin'ny baolina Tambajotra Ball import importika
Varingarin'i Ampifamadiho cylinder (kalitao tsara sy mateza tsara)
Ny hafainganam-pandeha vaky 0-24000 / MIN
Kabinetra fitantanana herinaratra kabinetra misy asa fanamafisana feno
Fomba fananganana fitaovana Fametrahana fitaovana mandeha ho azy
Famoahana ho azy Fanapahan-dàlana mandeha ho azy, manosika avy hatrany ny vokatra vita, manosika ary ampio ny fanesorana vovoka faharoa
Ny firafitry ny masinina 3,5 m lava matevina matevina matevina, vy gantry
Zintin'aratra 380V 3 dingana
Lanja afa-karatsaka 2500kg
Lanja tsy afa-karatsaka 2600kg
Kitapo fanaraha-maso Boaty Fanaraha-maso tsy miankina roa sosona
Previous: Fikaon-dàlana vaovao efatra nanamboatra ATC hazo cnc hazo efatra
Manaraka: ATC hazo cnc 1325